कक्षा ७ मा पढ्ने १३ वर्षकि लिजा लामा सानो उमेर देखिनै यस्तो प्रतिभा (भिडियो) - Samachar PatiSamachar Pati
कक्षा ७ मा पढ्ने १३ वर्षकि लिजा लामा सानो उमेर देखिनै यस्तो प्रतिभा (भिडियो)
मानिसभित्र कुनै न कुनै प्रतिभा लुकेको हुन्छ, त्यसलाई खोजि गरेर उजागर नगरुन्जेलसम्म प्रतिभा विक्षिप्त रुपमा रहन्छ भने अर्को व्यक्ति त्यस्ता प्रतिभाबाट अनभिज्ञ हुन्छन् र प्रतिभावान व्यक्तिको प्रतिभा ओझेल पर्नजान्छ। त्यस्तै हराएकी प्रतिभावान मध्य एक हुन् लिजा लामा र सानु खतिवडा।
लिजा लामाका पिताले निर्माण र निर्देशन गरेका चलचित्रमा सानु खतिवडाले अभिनय गरेकी हुन्। साथै लिजाले गाएको पहिलो गीतमा पनि सानुले नै मोडलिङ्ग गरेकी हुन्। उनीहरुको चिनजान पनि उक्त चलचित्रबाट नै भएको उनीहरुको भनाई रहेको छ। हेर्नुहोस् भिडियो :
बैज्ञानिकहरुले गरे यस्तो गल्ति !! गल्ति कै कारण बन्यो प्लाष्टिक खाने इन्जाइम ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
बिदेशबाट फर्किदै हुनुहुन्छ ? साबधान यस्ता सामान ल्याउँदा भन्सार बढि लाग्छ ।